खोकीले हैरान – Health Post Nepal
२०७५ पुष १२ गते १३:५३
चिसो मौसम सुरु भएदेखि नै मलाई निरन्तर खोकी लागिरहेको छ । केही दिन अलि कम भएजस्तो हुन्छ, फेरि बल्झिन्छ । घरेलु र अन्य धेरैखाले औषधि खाएँ, परीक्षण पनि गरिरहेको छु, तर पनि खोकी निको भइरहेको छैन, किन होला ?
अहिले नरोकिने खोकी लागेर हैरान भएका बिरामी धेरै आएका छन् । अस्पताल नआएकाले पनि कुराकानीका क्रममा खोकीले त्यसैगरी सताएको अनुभूति सुनाएको धेरै भेटेको छु मैले । २–३ वर्षअघि पनि यस्तोखाले समस्या देखिएको थियो । वास्तवमा यो सरकारका लागि चासोको विषय हुनुपर्ने हो, तर हामीकहाँ विद्यमान अवस्थामा त्यो सम्भव छैन ।
सामान्यतः भाइरसका कारणले रुघाखोकी लागेमा एक हप्तामा आफैँ ठिक भएर जान्छ । अर्को चरण भनेको एक हप्तामा पनि निको भएन भने एक्स रेतिर जानुपर्छ र क्षयरोगको जाँच गर्नुपर्छ । र, रोग निदान भएमा त्यहीअनुसार औषधि खानुपर्छ । तर, अहिलेको समस्या भिन्न छ । लहरेखोकीजस्तो, तर केही दिन रोकिने र फेरि बल्झिने भइरहेको छ । अधिकांश मान्छेले गुनासो गरिहेका छन् कि एक्स रे गराउँदा केही देखिँदैन । यत्तिकै एन्टिबायोटिक्स खायो, एक हप्ता रोकिन्छ, फेरि सुरु भइहाल्छ । खोक्दा, खोक्दा जिउ गलेजस्तो हुने गरेको छ ।
धेरै खोकेर कानसमेत दुख्ने गरेको भन्ने गुनासो पाइन्छ । यस्तो अनौठोखालको स्वास्थ्य समस्या देखिएमा अन्य देशमा हो भने निकै चासोको कुरा बन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो संस्कार छैन ।
हरेक सिजनमा फ्लु भाइरस सक्रिय हुने गर्छ । फ््लु भाइरस दुई प्रकारका हुन्छन्, ए र बी । एअन्तर्गत स्वाइन, हङकङ फ्लु पर्छन् भने बीअन्तर्गत इन्फ्लुएन्जा बी भाइरस पर्छ ।
सिद्धान्ततः र बिरामी हेरेको अनुभवका आधारमा पनि मलाई लाग्छ– हामीकहाँ कतै सबै भाइरस एक्टिभ त छैनन् ? एउटाको संक्रमण हुन्छ, केही दिनमा निको हुन्छ, फेरि अर्कोको संक्रमण हुन्छ, फेरि अर्को… ।
यसरी बिमारी निको नै हुन पाउँदैन । यसरी श्वास–प्रश्वासमा संक्रमण गर्नेखालका धेरै भाइरस हाम्रा वरिपरि घुमिरहेका छन् कि भन्ने लाग्छ । तर, तथ्यले पुष्टि गर्नुपर्छ ।
तपाईंको हकमा चिसो सुरु भएदेखि नै समस्या सुरु भई फर्की–फर्की आएको र विभिन्न परीक्षणसमेत गराइसकेको भन्नुभएको छ । कतिपय अवस्थामा भाइरल खोकी हो भने निको हुन ८ हप्तासम्म पनि लाग्ने हुन्छ । तपाईंले दिनुभएको जानकारीका आधारमा छाती क्लियर नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तसर्थ, तपाईंले तुरुन्त छातीरोग विशेषज्ञलाई भेटी उनकै परामर्शअनुसार विभिन्न परीक्षण गराउनु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो कुरा त छाती पूर्णतः क्लियर हुनुपर्छ । तपाईंमा टिभीलगायतको चेकजाँच गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, चिकित्सकको परामर्शमा समयमै परीक्षण गराउनुहोला, आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन ।
Tags: खोकी, चिसो मौसम, डा. शेरबहादुर पुन